ओपोको ‘एफ१९ प्रो’ सार्वजनिक : नयाँ आकर्षक भिडियो फर्म्याट्स र सुदृढ ब्याट्री पर्फर्मेन्स « News24 : Premium News Channel
ओपोको ‘एफ१९ प्रो’ सार्वजनिक : नयाँ आकर्षक भिडियो फर्म्याट्स र सुदृढ ब्याट्री पर्फर्मेन्स
काठमाडौं, ४ फागुन । अग्रणी ग्लोबल स्मार्ट डिभाइस ब्राण्ड ओपोले नेपालमा एफ१९ प्रो सार्वजनिक गरेको छ ।
शक्तिशाली र टिकाउ हुनुका साथै बहुआयामिक दृष्टिकोणसहित आफ्ना जीवनका स्मरणीय पलहरु कैद गर्न चाहनेका लागि मनोरञ्जक नयाँ भिडियो फिचर्सहरुका साथ एफ१९ प्रोको डिजाइन विशेषगरी “टे«ण्ड सिकर्स”हरुलाई ध्यानमा राखेर सार्वजनिक गरिएको छ ।
एफ१९ प्रोका अत्याधुनिक क्यामेरा फिचर्सले प्रयोगकर्ताका सिर्जनात्मकताका लागि पर्याप्त अवसर समेत उपलब्ध गराउने कम्पनीको दाबी छ । एफ१९ प्रोले, एफ सिरिज अन्तर्गतका आफ्ना पछिल्ला संस्करणका तुलनामा उच्च ब्याट्री र तीब्र कार्यसम्पादन क्षमता उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ ।
यो सबै कम्पनीले सुन्दर आकारको पातलो डिजाइन र फ्लोइंग लाइट डिजाइन अवधारणा सहितका दूई चहकिला रंगमा उपलब्ध गराएको छ । “ट्रेण्डसेटर्सहरु माझ एफ सिरिज, जीवनप्रतिको मायाँ, कार्यप्रतिको महत्वकांक्षाका साथै तिनको ब्यक्तिगत स्टाईल झल्काउन सघाउने सोचका साथ निर्मित फोनका रुपमा परिचित छ ।
ओपो नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बबी ट्राओले भने, “एफ१९ प्रो, प्रयोगकर्ताका प्रतिक्रिया र अत्याधुनिक प्रविधि माथिको बृहत्त अनुसन्धानको उपज हो । यो फोनले प्रयोगकर्ताका एफ सिरिजप्रतिको आकांक्षा पूर्ति गर्नुका साथै अमूल्य पलहरु मल्टिपल पर्सपेक्टिव (बहु दृष्टिकोण)का साथ कैद गर्न सघाउँछ ।
साथै, जीवनमा सहजताका लागि ३०वाट भोक फ्ल्याश चार्ज ४.० सहित शक्तिशाली ब्याट्रीपनि फोनमा उपलब्ध गराएको छ । उपभोक्ताका समग्र मागपूर्ति गर्ने सोचका साथ निर्मित एफ१९ प्रो नेपालमा सार्वजनिक गर्न पाउँदा हामी निकै उत्साहित छौँ ।”
त्यस्तै, फोनमा ३२एमपी फ्रण्ट(फेसिङ क्यामेराको प्रयोग गरिएको छ । उत्कृष्ट भिडियोका लागि हार्डवेयरका साथै सफ्टवेयर र पोष्ट प्रोसेसिङका लागि समेत फोनमा कम्पनीले राम्रो ब्यवस्था गरेको छ ।
एफ१९ प्रोमा भिडियोलाई आकर्षक देखाउन एआई कलर पोट्रेट भिडियोलाई परिस्कृतिकरणका साथ भिडियोमा प्रयोग गर्न मिल्ने तरिकाले उपलब्ध गरिएको छ । फोटोग्राफी भ्यारियण्टमा एआई कलर पोटे«ट भिडियोले, भिडियो शटको मान्छे पहिचान गरे जस्तै, एफ१९ प्रोले ब्याकग्राउण्डका मानिसलाई बुद्धिमताका साथ छुट्याउने बताइएको छ ।
साथै, शटमा रहेको मानिसलाई चहकिला रंगले हाइलाइट गर्दै ब्याकग्राउण्डमा मोनोटोन ब्ल्याक वा ह्वाइट फिल्टरको प्रयोग मार्फत पोट्रेटको विषयलाई झल्किन सघाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
रंग मार्फत आफ्नो रचनात्मकता भिडियोद्वारा प्रदर्शित गर्न चाहनेहरुका लागि ओपो एफ१९ प्रोमा मोनोक्रोम भिडियो फिचरपनि उपलब्ध छ । यसले कुनैपनि शटमा सिंगल आरजीबी रंगलाई बढावा दिनुका साथै अन्य रंगका प्यालेट्स फिल्टरआउट गरी फुटेजमा नाटकीयपन ल्याउँछ ।
फोटोमा उत्कृष्टताका लागि ओपोले डायनामिक बोके, नाइट फ्लेयर पोट्रेट लगायत ईफेक्टहरु पनि फोनमा उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी एआई कलर पोटे«ट, एआई ब्यूटिफिकेशन २.० जस्ता फिचर्सले फोटोमा रहेका मानिस वा मानिसको समूहका प्राकृतिक सौन्दर्यमा निखार ल्याउँदै फोटोमा उत्कृष्टता प्रदान गर्न सघाउँछ ।
एफ१९ प्रोमा रहेको एआई सिन ईन्ह्यान्समेन्ट २.०ले २० प्रकारका ल्याण्डस्केप शट्को पहिचान गर्ने क्षमता राख्नुका साथै पिक्सेल (बाई) पिक्सेल कलर स्चाचुरेशन र कन्ट्रास्टमा सुधार ल्याउने कार्य गर्छ । साथै, भिडियो एडिटिङमा सघाउँदै मुभि–क्वालिटी क्ल्प्सि स्वचालितरुपमा निकाल्न सघाउने लोकप्रिय फिचर, सोलुप भिडियोलाई पनि फोनमा निरन्तरता दिइएको छ ।
अल्ट्रा स्लिम डिजाइनका लागि पनि एफ सिरिज परिचित छ । एफ१९ प्रोमा पनि कम्पनीले यसलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको छ । थ्रीडी कभ्र्ड ब्याट्री र ७.८एमएम अल्ट्रा स्लिम बडी सहितको यो फोनको वजन जम्मा १७२ग्राम मात्र रहेको छ ।
हत्केलामा बोक्दापनि आरामदायी अनुभव होस् अर्थात् “यू होल्ड इट, यूल् लभ ईट” भन्ने तिर पनि विशेष ध्यान दिइएको छ । फोनमा ०.५५एमएम मोटाई सहितको ब्याट्री कभर र स्क्रिनबाट ताप फ्याक्नका लागि स्लिम ०.१एमएम ग्राफाइट प्लेटको प्रयोग गरिएको छ ।
तीब्र चार्जिङ सुविधा सहितको टिकाउ ब्याट्री
तीब्र गतिको चार्जिङ सुविधाका लागि ३०वाट भोक फ्ल्याश चार्ज ४.० प्रविधिका साथै ब्याट्री छिटो सकिने कारणले उपभोक्ताको दैनिकीमा कुनै समस्या नआओस् भन्ने सोचका साथ एफ१९ प्रोमा लामो समय सम्म टिक्ने ४३१०एमएएच क्षमताको ब्याट्री जडान गरिएको छ ।
आफ्नो साथमा चार्जर नहुँदा, साथै ब्याट्री लाईफ पनि अन्तिम केही प्रतिशत मात्र बाँकी रहने जस्ता अनपेक्षित अवस्थालाई समेत विशेष ध्यान दिई एफ१९ प्रोमा अल–डे स्मार्ट पावर सेभिङ फिचरपनि दिइएको छ । यो फिचरले सीपीयू फ्रिक्वेन्सी, फोनको ब्राइटनेस लगायत घटाई कल गरिरहेको, टेक्सटिङ वा नेभिगेशन एप चलाईरहेको अवस्थामा अन्तिम ५% ब्याट्री बाटै फोनलाई रुकावत विना चलाउन सघाउँनेछ ।
कलरओएस ११ः तीब्र मल्टिटास्किङको मज्जा
ओपो एफ१९ प्रोमा मल्टिटास्किङ गरिरहनुपर्ने प्रयोगकर्ताहरुलाई विशेष ध्यानमा राखि विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध छन् । उदाहरणका लागि कुनै एप चलाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई बन्द नगरिकन ह्वाट्सएप म्यासेजमा रिप्लाइ गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा युजरहरुले फ्लेक्सड्रप फिचरको प्रयोग गर्नसक्नु हुन्छ ।
कार्यालयमा कार्यरत प्रयोगकर्ताहरुका लागि डक्यूमेन्ट्स शेयरिङमा सहजता प्रदान गर्न एफ१९ प्रोमा नियरबाई शेयरिङ फिचर दिइएको छ । यसको माध्यमबाट नजिक रहेका अन्य ओपो प्रयोगकर्ताहरुलाई सिधै डक्यूमेन्ट्स शेयर गर्न सकिन्छ ।
ओपो एफ१९ प्रोमा उपभोक्ताको मागलाई दृष्टिगत गर्दै गोपनियता र सुरक्षाका लागि डाटा रिट्रिभ (पूणः प्राप्ति) तथा अनावश्यक ब्यक्तिको पहुँचबाट जोगाउन विशेष फिचर्सको ब्यवस्था गरिएको छ ।
फोन राखेको स्थान विर्सने तथा हराउने सम्भावना बोकेका मानिसका लागि यसमा ब्यक्तिगत मिडिया तथा फाइल्सका लागि ओपोको प्राइभेट सेफ सुविधापनि उपलब्ध छ । प्राइभेट सेफको माध्यमबाट हेट्याप क्लाउड एक्सेस गरी हराएको फोनमा रहेका आफ्ना ब्यक्तिगत डाटा पूणः प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
ओपो एफ१९ प्रो, फ्ल्यूड ब्ल्याक र फ्यान्ट्यास्टिक पर्पल गरी दूई आकर्षक रंगमा उपलब्ध हुनेछन् । ८ जीबी ¥याम र १२८जीबी सञ्चय क्षमता सहितको एफ१९ प्रोको मूल्य रु. ४४ हजार ९ सय ९० निर्धारण गरिएको छ ।
एफ१९ प्रो सार्वजनिकका लागि आयोजित कार्यक्रम मार्फत ओपो ब्याण्ड स्टाइलपनि सार्वजनिक गरिएको छ । ओपो ब्याण्ड स्टाइलको मूल्य भने रु. ५ हजार ५ सय ९९ रहेको छ । ओपो ब्याण्ड स्टाइलपनि नेपाली बजारमा मार्च २३देखि नै उपलब्ध हुनेछ ।